संरचनामा नेपाल नयाँ भइसक्यो, अब विकासमा नयाँ हुन्छ– देव गुरुङ | Tapaikokhabar
संरचनामा नेपाल नयाँ भइसक्यो, अब विकासमा नयाँ हुन्छ– देव गुरुङ
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : कात्तिक १०, २०७५ Big News, मुख्य खबर, लाेकस्टार विशेष
नेकपा माओवादी केन्द्रले युरोपेली युनियन (इयु)ले आफ्नो सीमा नाघेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सो पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख देव गुरुङले नेपालको संविधानबारे टिप्पणी गर्न र सुझाव दिन इयुलाई कुनै अधिकार नभएको बताए । तपाईकोखबरडटकमका लागि कुरा गर्दै उनले इयुको काम निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्नेमात्र रहेको बताए । प्रस्तुत छ, उनै गुरुङसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश ।
युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्यको आरक्षण कोटा कटौती गर्न दिएको सुझाबलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले नै इयुको सुझाव प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाइसकेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला हो, विदेशीले यो गर वा त्यो गर भन्ने अधिकार राख्न सक्दैनन् । इयुले जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले कुट्नीतिक दायरा नाघेको छ । अझ सारा नेपालीले मानेको विषयमा इयुले अनावश्यक टिप्पणी गर्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिदैन । निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र इयुबीच भएको सम्झौताविपरीत आएको सुझाव हो ।
त्यो सच्याउनुपर्छ । इयुको त्यस्तो सुझाबको असर के हुन सक्छ ?
यस्ता सुझाब र प्रतिक्रियाहरु नेपालको संविधानको प्रावधानलाई गम्भीर चुनौती हुन् । संविधानका यी प्रावधानहरु नेपाली सामाजिक बनोटको समावेशी र सार्वभौम सिद्धान्त अनुरुप हो नि । समाधान भइसकेका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई उचाल्ने किसिमका प्रतिक्रिया आउँदा त्यसको असर त गम्भीर हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटक–पटक यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा किन हस्तक्षेप गर्छन ?
नेपाल विविधतामा एकता भएको मुलुक हो । यहाँ सबै जातजाती, भाषाभाषी मिलेर बसेका छन् । म त भन्छु, विश्वमै उदाहरणीय मुलुक हो नेपाल । नेपालको यही मौलिकता र फरक पहिचान हेर्न नचाहनेहरुले हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् । नेपालमा आन्तरिक कलह हेर्न चाहनेहरु नेपालमा पछिल्लो समय भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई ल्याएको स्थायित्वबाट हच्किएका छन् । तीनै शक्ति कसरी यो परिस्थितिलाई बिगार्न सकिन्छ भनेर छेउ वा कुनाबाट अप्रत्यक्ष आक्रमण गर्न खोजिरहेका छन् । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।
भनेपछि इयुले यस्तै कुनै स्वार्थ प्रतिवेदनमा घुसाएको हो ? सबैसामु स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालको संविधानबारे बोल्ने अधिकार इयुलाई कसले दियो ?
इयुको प्रतिवेदन भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता विपरीत देखिन्छ ।
नेपाल साँच्चै स्थायित्व र विकासतर्फ अघि बढेको हो ?
यसमा कुनै शंका नै छैन । हामीले जनतासँग भोट मागेकै स्थायित्व र विकासका लागि हो । यसको विकल्प वा कुनै पनि बाहाना अब हामीसँग बाँकी छैन ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले विकास र समृद्धिको कुरा गरेपनि त्यसको तयारी र सिनारियो भने केही नदेखिएको भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेको छ नि ?
अहिलेसम्म मुलुक विकास हुन नसक्नुको कारण पनि यही सोचाइ त हो । हुँदैन, गर्न सकिदैन, जोखिम हुन्छ, हामी गरिब छौँ भन्नेजस्ता कमजोर सोचाइका कारण हामी विकासमा पछि परेका हौँ ।
हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर विकासका लागि हामीले खोइ जोखिम उठाएको ?
‘नो रिस्क नो गेन’ भनेजस्तै विकास र समृद्धिका लागि हामीले थोरै जोखिम पनि मोल्न सक्नुपर्छ ।
त्यो जोखिम भनेको के हो ?
चुनौतीलाई चिर्ने क्रममा अरु चुनौतीहरु खडा हुन सक्छन् । विकासका लागि कुरिती, कुसंस्कार, भ्रष्टाचार र जवाफहीनतालाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । जरा गाडेर बसेको यो बेथितिलाई उखेलेर फाल्नु चानचुने कुरा होइन । यसले केही जोखिम पैदा गर्न सक्छ । तर, यही सरकारले त्यो जोखिम उठाउँछ र नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ ।
मुलुक समृद्धिका आधारहरु के के हुन् ?
हामीसँग समृद्धिका सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । नेपाल आफैँमा जलस्रोतको धनी देश हो । त्यसबाट थुप्रै फाइदा लिन सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा नै नेपालको विकासका प्रमुख साधक बन्न सक्छन् ।
जलस्रोतको धनी भएरमात्र मुलुक विकसित हुने भए त, अर्जेन्टिना, ब्राजीलजस्ता देशहरु यतिबेला अमेरिकाभन्दा धनी हुन्थे होला, हैन र ?
त्यही त, विगतमा हामीले जलस्रोतको धनी देश भनेर छाती फुलाउने काममात्रै गर्यौँ । अब हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उचित वातावरण बनाउने छौँ । विस्तारै विदेश गएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्केर यतै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौँ ।
यी सब कामका लागि चुनौती पनि त थुप्रै छन नि ?
हो, वास्तवमा अहिले हामीसँग चुनौतीका चाङ नै छ । तर, चुनौतीसँग डट्न नसक्ने हो भने फेरि हामी पछि परेको परै हुन्छौँ । हामीसँग अरु विकल्प छैन ।
चुनौती सामना गरेर विकासतिर लम्कन के गर्नुपर्छ ?
निश्चय पनि सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ । विकासमा पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । सबै दल एक ठाउँमा उभिएर समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्छ । यसो गरिए, अहिले देखिएका चुनौती गौण हुनेछन् ।
यस भन्दा अगाडीत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
यस पछिबोलेरोको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण
देव गुरुङको प्रतिक्रिया
युरोपेली युनियन (इयु) प्रतिक्रिया